ट्विटर भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् ➵ भिडियो, गिफ, ट्वीट फोटो, प्रोफाइल चित्र, हेडर ब्यानर, थम्बनेल, उपशीर्षक, र color्ग प्यालेट, ट्विटरबाट ट्यागहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
ट्विटर भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
❝ट्वीटरबाट ट्वीटर भिडियोहरू र GIF डाउनलोड गर्नुहोस्❞
➶ भिडियो, गिफ, ट्वीट फोटो, प्रोफाइल चित्र, हेडर ब्यानर, थम्बनेल, उपशीर्षक, र color्ग प्यालेट, ट्विटरबाट ट्यागहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर ट्वीटरमा इम्बेडेड ट्विटर भिडियोहरू र GIF डाउनलोड गर्न एक अनलाइन उपकरण हो। ट्विटरबाट कुनै पनि भिडियो र GIF बचत गर्नुहोस्।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर क्रोम / फायरफक्स
ट्विटर भिडियो डाउनलोडरले तपाईंलाई ट्विटरबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न वा ट्विटरबाट जीफहरू सीधा तपाईंको पीसी, ट्याबलेट वा एन्ड्रोइड फोनमा बचत गर्न अनुमति दिन्छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
ट्विटरबाट भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
कसरी ट्वीटर भिडियो अनलाइन बचत गर्ने र ट्विटरबाट GIF डाउनलोड गर्ने बारेमा बारेको बारेमा चिन्ताजनक? यी तीन सरल चरणहरू र खुशीयाली डाउनलोड अनुसरण गर्नुहोस्!
तपाईंको ट्विटर खातामा लगईन गरेपछि, तपाईं डाउनलोड गर्न चाहानुभएको भिडियोको माथि दायाँ कुनामा अवस्थित ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र ट्वीटमा प्रतिलिपि लि link्क चयन गर्नुहोस्।
ट्वीट युआरएल प्रतिलिपि भए पछि माथिको पाठ बाकसमा यहाँ यूआरएल टाँस्न माउसको दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र प्रविष्ट कुञ्जी थिच्नुहोस्।
हाम्रो ट्विटर भिडियो डाउनलोडरले उच्च गुणवत्ताको MP4 भिडियो लि ext्कहरू निकाल्छ, र तपाईं आफूले चाहे जुन गुणवत्ता डाउनलोड गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
क्रोम विस्तार र फायरफक्स एड-अनको साथ कसरी ट्विटर भिडियो डाउनलोड गर्ने
🧐 कहिलेकाँही हामी ट्विटरमा केहि अत्यधिक रचनात्मक भिडियोहरू भेट्दछौं जुन हामी डाउनलोडको प्रतिरोध गर्न सक्दैनौं। छवि बचत कुनै समस्या छैन। भिडियोहरूको लागि, तथापि, तपाईंलाई एक विश्वसनीय ट्विटर भिडियो डाउनलोडर आवश्यक पर्दछ। उपकरणले तपाईंलाई खाताहरूको सम्पूर्ण मिडिया पुस्तकालयहरू डाउनलोड गर्न दिन्छ। अर्को ट्यूटोरियल अनुसरण गर्नुहोस् सर्वश्रेष्ठ ट्विटर भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गर्नका लागि ट्विटरबाट भिडियो र GIF बचत गर्नका लागि। आउनुहोस्!
ट्विटर वेबसाइट खोल्नुहोस्।
ट्विटरमा भिडियो प्ले गर्नुहोस्।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर क्रोम / फायरफक्स खोल्नुहोस् ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
तपाईंले यो उपकरण खोल्नु भएपछि कोडको एउटा टुक्रा हालको ट्याबमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कोड json कोडको विश्लेषणको लागि जिम्मेवार छ र स्क्रिनमा देखाइएको ट्वीटको आईडी फेला पार्छ। स्क्रिन फ्रेममा नदेखिने ट्वीटहरू वेवास्ता गरियो।
भिडियो आईडी फेला पछाडि, उपकरणले ट्विटरमा json डाटा प्राप्त गर्न अनुरोध पठाउन जारी राख्दछ। डाउनलोड बटन त्यसपछि प्रत्येक ट्वीट मुनि र उपकरण विन्डो भित्र देखा पर्नेछ।
चीजहरू जुन तपाईं प्रत्येक ट्वीटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भिडियो, gifs, ट्वीटमा प्रत्येक छवि, छुट्न सकिने उपशीर्षकहरू। तपाईं अवतारहरू र ब्यानरहरू उच्च गुणवत्तासँग हेर्न र विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। ट्वीट्समा सजिलैसँग प्यालेटहरू र ट्यागहरू प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
नोट: यो उपकरणले ट्विटर द्वारा होस्ट गरिएका फाइलहरू डाउनलोड गर्न मात्र समर्थन गर्दछ। यस विस्तारले प्रत्येक वेबसाइटमा पहुँच प्रदान गर्दैन, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले अन्य वेबसाइटहरूमा इम्बेड गरिएको ट्वीटबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्दैनन्।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर किन प्रयोग गर्ने?
यदि भिडियो ट्विटरबाट हटाइएको छ, भने तपाईं अझै यसलाई हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
सबै डाउनलोड भिडियोहरू सजिलैसँग साझा गर्नको लागि तपाईंको स्मार्टफोनमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ।
तपाईंले डाउनलोड गर्नुभएको कुनै पनि भिडियो अफलाइन हेर्न सकिन्छ।
तपाईं जब यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अफलाइन प्लेसूचीहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
☀ क्याप्शनको साथ ट्विटर भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर भिडियोलाई MP4 मा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
☀ डाउनलोड अल्ट्रा HD 1440p, पूर्ण HD 1080p, HD 720p भिडियो ट्विटरबाट।
☀ ट्विटर gif डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर निजी भिडियो डाउनलोडर।
☀ ट्विटर प्रसारण डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटरबाट मूल छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर प्रोफाइल चित्र दर्शक।
☀ ट्विटर प्रोफाइल चित्र डाउनलोडर।
☀ ट्विटर हेडर छवि डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर थम्बनेलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ थोक डाउनलोड ट्विटर छविहरु।
☀ ट्विटर प्रत्यक्ष भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर अडियो डाउनलोडर।
☀ ट्विटर भिडियोलाई एमपी to मा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर सीधा सन्देश बाट भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ ट्विटर भिडियो gif रूपान्तरण गर्न।
☀ ह्याशट्यागबाट ट्वीट्स डाउनलोड गर्नुहोस्।
सामाजिक नेटवर्क ट्विटर संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाईट हो। साइट वेब ईन्टरफेस, इन्स्टन्ट मेसेजिंग टूल वा कुनै पनि उमेरका इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि तेस्रो-पार्टी ग्राहक प्रोग्रामहरूको प्रयोग गरेर सार्वजनिक सार्वजनिक सन्देशको लागि डिजाइन गरिएको हो। प्रयोगकर्ताहरूले ट्वीटर भिडियोमा प्रकाशित गरेको सामग्रीमध्ये एक सबैभन्दा पपुआवार हो।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर एक अनलाइन वेब अनुप्रयोग हो जुन ट्विटर भिडियोहरू र GIFs डाउनलोड गर्न तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमा सिधा छ।
ट्विटरबाट gifs डाउनलोड गर्नुहोस्। भिडियोको रूपमा बचत गर्नुहोस्।
ट्विटरबाट उपशीर्षकहरू निकाल्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्।
Mp4 मा ट्विटर
उपकरणले तपाइँलाई ट्विटरबाट तीन रिजोलुसनहरू, एसडी, एचडी, र यूएचडी (यदि विकल्प उपलब्ध छ भने) मा भिडियोहरू डाउनलोड गर्न दिन्छ।
निजी ट्विटर भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाईं ट्विटरबाट कुनै पनि भिडियो वा छवि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ, निजी सामग्री सहित।
सबै भिडियोहरू सीधा ट्विटर सीडीएन सर्भरबाट निकालिन्छन्, यो उपकरण पूर्ण सुरक्षित गर्दछ।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर गुगल क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा, माईक्रोसफ्ट एज र कुनै पनि वेब ब्राउजरमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
यहाँ तपाईंको प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - कसरी तपाईं ट्विटर भिडियो बचत गर्नुहुन्छ?
+ ट्विटर भिडियो डाउनलोडर के हो?
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर एक नि: शुल्क उपकरण हो जुन तपाईंलाई अफलाईन प्लेब्याकका लागि ट्विटरबाट कुनै पनि भिडियोहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्न मद्दत गर्ने क्षमता राख्दछ।
+ आईफोनमा ट्वीटरबाट GIF कसरी बचत गर्ने?
आईफोनमा ट्वीटरबाट gif बचत गर्न कृपया यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्। तपाईको आईफोनबाट ट्वीटर अनुप्रयोगमा जानुहोस् र तपाईको चाहानुहुन्छ GIF फेला पार्नुहोस् र यसलाई बचत गर्नुहोस्, कृपया ट्याप गरी जीआईएफ होल्ड गर्नुहोस् जुन तपाईले बचत गर्न चाहानुहुन्छ, लाइब्रेरीमा सेभमा क्लिक गर्नुहोस्, रमाउनुहोस् तपाईको GIF फाईल सेभ भएको छ।
+ के ट्विटर डाउनलोडरले डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू भण्डार गर्दछ वा भिडियोहरूको प्रतिलिपि राख्छ?
हामी भिडियोहरू भण्डार गर्दैनौं। न त हामी डाउनलोड गरिएका भिडियोहरूको प्रतिलिपि राख्दछौं। सबै भिडियोहरू ट्विटरको सर्भरहरूमा होस्ट गरिएका छन्। साथै, हामी हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूको डाउनलोड ईतिहासहरूको ट्र्याक राख्दैनौं।
+ म कसरी ट्विटरबाट निजी भिडियो डाउनलोड गर्ने?
यदि तपाईं ट्विटरबाट एक निजी भिडियो डाउनलोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईंले के गर्नु भयो भनेको ट्वीटको URL थाहा पाउनु हो। निजी खाताको लागि ट्विटरको भिडियोहरू डाउनलोड गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। ती मध्ये एउटा तरीकाले निजी ट्वीटर खाताको युआरएल जान्नको लागि एउटा ट्विटर खाता बनाएर तपाईलाई आफ्नो ट्वीटको युआरएल थाहा पाउनु पर्ने व्यक्तिको अनुसरण गर्नुहोस्। तपाईंले व्यक्तिबाट स्वीकृत गरे पछि र यदि व्यक्तिले तपाईंको मित्रताको अनुरोधलाई पुष्टि गर्दछ भने, तपाईं तिनीहरूको सबै निजी ट्वीटहरू देख्न सक्नुहुनेछ। भिडियोहरू डाउनलोड गर्न तपाईंले क्रोम वा फायरफक्सका लागि विस्तारहरू स्थापना गर्नु पर्छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
+ डाउनलोड गरिएको ट्विटर भिडियोको ढाँचा के हो?
ट्विटर भिडियोको उपलब्ध गुणस्तरमा निर्भर गर्दै, हाम्रो ट्विटर भिडियो डाउनलोडरले १40p०p, 1080p, HD गुणवत्ता र SD गुणस्तर भिडियो लिंकहरू निकाल्छ। तपाईं आफूले चाहेको डाउनलोड गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, केहि अवस्थाहरूमा, भिडियो गुणवत्ता कमजोर छ र मात्र उपलब्ध भिडियो एसडी गुणस्तरको छ।
+ मेरो एन्ड्रोइड फोनमा ट्विटर भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि फायरफक्समा पहिले नै उपलब्ध छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
+ ट्विटरबाट म कति भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्छु?
ट्विटर भिडियो डाउनलोडरको कुनै सीमा छैन, प्रति घण्टा, दिन वा अरू। तपाईं ट्विटरबाट धेरै भिडियोहरू र चित्रहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको इच्छा अनुसार।
+ के म भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छु यदि म ट्विटरको एक दर्ता प्रयोगकर्ता छैन?
होइन। तपाईंलाई ट्विटर रेजिष्ट्रेसन चाहिन्छ लग इन गर्न र भिडियोहरू हेर्न सक्षम हुन।
ट्विटर भिडियो अनलाइन पूर्ण HD डाउनलोड गर्नुहोस्
ट्विटर भिडियो डाउनलोडरले तपाईंलाई तपाईंको मनपर्ने ट्विटर भिडियोहरूको लागि सीधा लिंकहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ र तिनीहरूलाई अफलाइन हेर्न र साझेदारीको लागि बचत गर्दछ।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर एक उत्तम उपकरण हो जुन तपाईं ट्विटरबाट मेरो कम्प्युटरमा भिडियोहरू र GIF डाउनलोड गर्न अनलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर पूर्ण सुरक्षित छ र सीधा ट्विटर सीडीएन सर्भरबाट भिडियो डाउनलोड गर्दछ।
यस उपकरणले डेस्कटप कम्प्युटर, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरू सहित सबै उपकरणहरूको लागि काम गर्दछ।
यस उपकरणले तपाईंलाई भिडियोहरू (MP4s को रूपमा) र ट्विटरबाट GIFs डाउनलोड गर्न दिन्छ।
ट्विटर भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् एक प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेसको साथ एक उपकरण।
क्लिपहरू डाउनलोड गर्न एउटा छिटो र भरपर्दो तरीका।
यो एक सुपर-द्रुत र दुबला उपकरण हो जुन तपाइँलाई फ्ल्याशमा ट्विटरबाट भिडियोहरू बचत गर्न अनुमति दिँदछ।
ट्विटर प्रसारण भिडियो डाउनलोड गर्नका लागि अद्भुत विस्तार।
यो ट्वीट २gif अनुप्रयोगको लागि उत्तम विकल्प हो।
ट्विटर भिडियो डाउनलोडर बोट - ट्विटरबाट भिडियोहरू र GIFs डाउनलोड गर्न र बचत गर्न उत्तम नि: शुल्क अनलाइन उपकरण 2021